ကားအရောင်းလုပ်ငန်းကိစ္စအဝဝအား ကူညီဆောင်ရွက်ပေးသောဝန်ဆောင်မှု | CarsDB
Premium Assist ဆိုတာဘာလဲ
Premium Assist Service တွင် အဓိကအားဖြင့် -
ယာဉ်စစ်ဆေးခြင်း (Vehicle Inspection)
ယာဉ်အားတန်ဖိုးဖြတ်ခြင်း (Vehicle Value Appraisal)
ရောင်းချခြင်း (Sales Processes) တို့ပါဝင်မှာဖြစ်ပါတယ်။
1. ယာဉ်စစ်ဆေးခြင်း (Vehicle Inspection)
ကားတစ်စီးကိုရောင်းချတဲ့အခါမှာ ကားရဲ့အခြေအနေကိုသိရှိနိုင်ရန် စစ်ဆေးမှုပြုလုပ်ခြင်းဟာ အရေးကြီးသောအခန်းကဏ္ဍ တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ ကားတစ်စီးရဲ့လက်ရှိအခြေအနေအမှန်ကိုစစ်ဆေးခြင်းဖြင့် ကားကိုရောင်းချလို့ရမည့်ဈေးနှုန်းကိုခန့်မှန်းနိုင် မှာဖြစ်သလို၊ ကားဝယ်ယူလိုသူကလည်း အသေးစိတ်စစ်ဆေးထားချက်များကို လေ့လာပြီးမှဝယ်ယူနိုင်တဲ့အတွက် ပုံမှန်ရောင်း ချနေကြတဲ့ ကားများစွာရှိတဲ့အထဲက စစ်ဆေးချက်များပါရှိတဲ့ကားများကို ပိုမိုစိတ်ဝင်စားပြီးဝယ်ယူကြမှာဖြစ်ပါတယ်။
CarsDB ရဲ့ Vehicle Inspection နည်းပညာဖြင့် စစ်ဆေးချက်ပေါင်း ၁၈၀ ကျော်ကိုစစ်ဆေးမှာပါတယ်။ စစ်ဆေးမည့် အချက် များကတော့ -
Body Frame Accident Check (ကားအတိုက်အခိုက် ရှိ/မရှိ)
Engine & Transmission Systems (အင်ဂျင်နှင့် ဂီယာဘောက်စနစ်များ)
Suspension & Steering Systems (ကားအောက်ပိုင်းကြံ့ခိုင်မှု)
Car Interior Trim & Equipment (အတွင်းခန်းနှင့် ဆက်စပ်ပါဝင်ပစ္စည်းများ)
Exterior Paint & Body Conditions (ဆေးသားနှင့် ကားကိုယ်ထည်အခြေအနေများ)
Electrical & Electronic (OBD II Check) စသည်တို့ဖြစ်ပါတယ်။
စစ်ဆေးပြီးရရှိလာသောအချက်များကို Inspection Report ထုတ်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။
2. ယာဉ်အားတန်ဖိုးဖြတ်ခြင်း (Vehicle Value Appraisal)
ကားတစ်စီးကိုရောင်းချရာမှာ ဈေးနှုန်းမှန်ကန်စွာဖြင့်ရောင်းချမှသာ အမြန်ဆုံးရောင်းချလို့ရနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ မှန်ကန်တဲ့ဈေး နှုန်းတစ်ခုဖြစ်ရန် ကား၏အခြေနေနှင့် လက်ရှိဈေးကွက်ပေါက်ဈေးတို့ကို ခြုံငုံသုံးသပ်နိုင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ မှန်ကန်သောဈေး နှုန်းဖြင့်ရောင်းချတဲ့အခါမှာ ရောင်းချသူအတွက် နစ်နာမှုများမဖြစ်ပေါ်နိုင်တော့သလို၊ ဝယ်ယူသူများအနေနှင့်လည်း ဈေးနှုန်းနှင့်တန်သော ကားကောင်းတစ်စီးကို အချိန်ကုန်လူပန်းမဖြစ်စေဘဲ ဝယ်ယူရရှိနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။
CarsDB မှ ကားတစ်စီး၏ဈေးနှုန်းကိုဖြတ်ရာမှာ Inspection စစ်ဆေးထားသော အချက်အလက်များနှင့် လက်ရှိကားဈေးကွက် ပေါက်ဈေးတို့အပေါ်မှာမူတည်ပြီး ရောင်းချရမည့်ဈေးနှုန်းကို အကြံဉာဏ်ပေးမည်ဖြစ်ပါသည်။
3. ရောင်းချခြင်း (Sales Processes)
ရောင်းချသူကိုယ်စား ရရှိလာသောစုံစမ်းမေးမြန်းမှုများကိုလက်ခံဖြေကြားပေးခြင်းနှင့် ဈေးနှုန်းညှိနှိုင်းမှုများပြုလုပ် ပေးခြင်း
ကား၏ အတွင်း၊ အပြင်၊ အင်ဂျင်ခန်း၊ အောက်ပိုင်း စသည်တို့ကို အသေးစိတ်ရိုက်ကူးထားသော ဓါတ်ပုံနှင့် ဗီဒီယိုများအပြင်၊ ကားအချက်အလက်အသေးစိတ်ဖေါ်ပြချက်တို့ကို Inspection စစ်ဆေးထားချက်များနှင့်တကွ CarsDB Website နှင့် Mobile Application များမှာ အရောင်းကြော်ငြာတင်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ ဒါ့အပြင် Facebook Fans ၁ သန်းကျော်ရှိတဲ့ CarsDB Facebook Page မှာလည်းကြော်ငြာပေးသွားမှာဖြစ်တဲ့အတွက် အမြန်ဆုံးရောင်းထွက်နိုင်မှာသေချာပါတယ်။
ထိုသို့ကြော်ငြာပြီး ရရှိလာတဲ့စုံစမ်းမေးမြန်းမှုများကို CarsDB မှ အရောင်းဝန်ထမ်းများမှ ရောင်းချသူကိုယ်စားလက်ခံဖြေကြား ပေးမှာဖြစ်ပြီး၊ ဈေးနှုန်းညှိနှိုင်းမှုများကိုလဲ ပြုလုပ်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ ထို့အပြင်အရောင်းအဝယ်ဖြစ်သွားတဲ့အခါမှာလည်း အရောင်းအဝယ်စာချုပ်များကိုပြင်ဆင်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။